Archive du 20191224
Andry Rajoelina Ampijabahan’ny HCC…
Milaza indray ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) fa ara-dalàna tanteraka ny voalazan’ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana na ny LFI 2020,
Fanaovana kolikoly Ny fonksionera no lohalaharana…
Volabe no mihodina amin’ny kolikoly, ana miliara dolara maro. Mampahantra ny firenena fa mampanankarena antokon’olom-bitsy izy io.
Fiarahan’ny mitovy fananahana « Tafita tany amin’ny mpitondra ny antso… »
Namoaka fanambarana ny filohan’ny FJKM omaly manoloana ilay lalàna niteraka resabe. Teo anoloan’ny fanambarana nataonay tamin’ny zoma 20 desambra 2019,
Mihaingo ambony tsikoko !
Miha mitombo andro aman’alina ireo mahantra fadiranovana tsy manan-kialofana amin’ny alina eny ambanin’ireo tonelina eto Antananarivo.
Tataon-ketra ho an’ ny fako sy ny fanadiovana Mba hipaka mivantana any amin’ny vahoaka
Any amin’ny firenena mandroso dia tsy ahitana olona manarinary hodi-boankazo na fako eny an’ arabe satria hentitra ny azy ireo ny fampiharana ny lalàna.
Fitakian`ny mpianatra sy ny SECES Enina no efa nahitana vahaolana”
“Hanomboka amin`ny taona 2020 ny fanadiovana ny tranon`ny mpianatra sy hahafantarana an ireo mpianatra tena izy.
Loza matetika sy faty olona Nametra-pialana ny lehiben'ny orinasa Boeing
Nametra-pialana omaly i Dennis Muilenburg Filoha Tale Jeneralin’ny orinasa Amerikanina Boeing,
Mpiasan’ny Fiadidian’ny Repoblika Niara-nifaly tamin’ny Filoha mivady
Ny krismasy dia andro iray hankalazana ny nahaterahan’i Jesosy Kristy, ka izay no mahatonga antsika eto.
FAHASALAMAN’IREO SAHIRANA Hiara-kiasa ny Airtel sy ny Mobile Hilfe
Betsaka ireo olona tsy afaka mitsabo tena intsony ankehitriny noho ny hasarotan’ny fiainana .
Jiro hiatrehana ny fety Nanampy ekipa ny JIRAMA
Mandray fepetra maromaro ny orinasa hisorohana ny olan’ny fahatapahan-jiro sy rano, amin’izao ankatoky ny Noely sy ny faran’ny taona izao.
Fifanampiana Malagasy Olona 500 nozaraina vary sy menaka
Olona miisa 500 avy eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina no nozarain’ny fikambanana Fifanampiana Malagasy vary sy menaka tao amin’ny birao foibeny, tetsy Ampandrana, ny alatsinainy lasa teo.
Halatra lakroam-pasana 3 mianadahy voasambotra
Nanjavona tsikelikely ireo lakroam-pasana vita amin’ny vy, na misy vy tamin’ireo fasana eny amin’ny "croisement Boanamary » ao Mahajanga, efa fotoana maromaro izao.
BEHORIRIKA Mpiasana “cash point” nomena «yaourt» mahafaty
Nomen’ny namany “yaourt” nolaroina poizina ireo mpiasan’ny cash point teo Behoririka.